July 2018 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Jul 31, 2018 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya. Halkan ka dhagayso…
Sarkaal Katirsan Police-ka Dowladda Oo Goordhow Muqdisho Lagu Toogtay.
Warar goordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa shaacinaya in halkaas lagu dilay sarkaal katirsan Police-ka dowladda federaalka. Sarkaalka la dilay waxaa lagu magacaabaa Cabdi Cali, waxaana dilay rag hubeysan oo katirsan Xarakada…
guuleed	 Jul 31, 2018 0
warka duhurnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 31 07 2018
Iyadoo todobaadyadii tagay madaxda wadamada Iiraan iyo Maraykanka ay hawada isku marinayeen hanjabaadyo iyo weeraro afka ah ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay la kulanka madaxweynaha Iiraan…
Sarkaal Lagu dilay Dagaal ka dhacay Degmada Dayniile.
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan ka fuliyay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Howlgalkan oo ahaa mid gaar ah, islamarkaana qorsheysnaa ayaa lagu dilay sarkaal katirsna ciidamada dowladda,…
qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa warka subaxnimo oo saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka subaxnimo 31 07 2018.
Qaraxyo Lagu weeraray Goobo Muhiiim ah Oo Muqdisho Ka dhacay.
Habeenkii xalay, waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro qaraxyo ah oo lagu weeraray goobo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda federaalka. Qaraxyada Xalay ay Muqdisho marti gelisay oo gaaraya illaa iyo labo qarax waxaa lagu…
Sida uu shaaciyay xisaab barta Twitterka ka diiwaan gashan, soona tabiya wararka la xiriira raafka maamulka Aala-Sucuud uu ku hayo culimada iyo cid weliba oo uu kaga cabsi qabo iney ka hor timaado tallaabooyinka uu wado, waxaa la xiray…
cusmaan	 Jul 30, 2018 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo lagu soo qaato wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda iyo wareysiyo muhim ah. Halka Ka Degso Dhuuxa Wareysiyada oo Tayo Sare Ah MP3 Halkan Ka Degso Dhuuxa wareysiyada oo Tayo Dhere…
guuleed	 Jul 30, 2018 0
warka duhurnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 30 07 2018